Chechi yekutanga yakanga yakaita sei? ▷ ➡️ Ziva Pamhepo ▷ ➡️
Chechi yekutanga yakanga yakaita sei?
Chechi yekutanga yakanga yakaita sei? Kereke yekutanga yaive inoumbwa nevaKristu vachiuya pamwe chete kuzoyanana uye kuparidza vhangeri, inotungamirwa na vaapositori, aiparidzira dzidziso dzaJesu. Kutanga muJerusarema, kereke yekutanga yakakurumidza kupararira kune dzimwe nzvimbo dzakawanda.
Kereke yekutanga yakatanga pazuva rePendekosti, vadzidzi pavakagamuchira Mweya Mutsvene. Shoko rokuti kereke rinoreva “gungano” uye ndiwo maonero avakaita kereke, se boka revanhu vaitenda muna Jesu. Chechi yakanga isingabatanidzwi nechivakwa chipi nechipi.
1 Chechi yekutanga yaive yakaita sei?: kurongeka, kuwedzera uye kukakavara
1.1 Sangano reChechi yekutanga
1.1.1 Misangano yekereke yekutanga yaive yakaita sei?
1.3 Makakatanwa muChechi yekutanga
Chechi yekutanga yaive yakaita sei?: kurongeka, kuwedzera uye kukakavara
Zvainge zvakaita Chechi yekutanga: kurongeka, kuwedzera nemakakatanwa
Sangano reChechi yekutanga
Kereke yekutanga yaive nehurongwa hwakareruka: vaivepo vanhu vaidzidzisa (vaapositori nevakuru) nevamwe vaidzidza. Gare gare, vanhu vakatangawo kusarudzwa nokuda kwemabasa okutarisira, akadai sokugovera zvokudya. Vachitungamirirwa nevatungamiri, munhu wose aikwanisa kupa uye kubatsira.
“Zvino vanegumi nevaviri vakadanira chaunga chevadzidzi, vakati: Hazvina kunaka kuti isu tisiye shoko raMwari, kuti tishande pamatafura.
Tsvagai, saka, hama, pakati penyu varume vanomwe vanopupura zvakanaka, vazere neMweya Mutsvene uye nehungwaru, vatinozoisa mumaoko edu nebasa iri.
Uye isu ticharambira mumunyengetero nomuushumiri hweshoko. Mabasa 6: 2-4
Basa revatungamiri rakanga risiri roku“rayira” vamwe. Chinangwa chayo chaiva dzidzisai vamwe vadzidzi nzira yaJesu, kuti munhu wose akure. Chinangwa chaizova gadzirira vadzidzi vanokwanisa kudzidzisa nekudzidzisa vamwe vadzidzi.
Kereke yekutanga yaizviona seya mhuri kupfuura sesangano. Zvavo Nhengo dzakagovana zvinhu zvadzo uye dzaifarira kuungana. Vakabatsirana nekukurudzirana. Chinangwa chake chaive chekukura mhuri yaMwari nekuparidza evhangeri.
“Vose vakatenda vakanga vari pamwe chete, uye vane zvinhu zvose zvavo vose;
vakatengesa nhumbi dzavo nenhumbi dzavo, vakazvigovera kuna vose, mumwe nomumwe sezvaakanga ashaiwa.
Vaimedura chingwa paimba neimba, vachidya nemufaro nemoyo wakarurama, vachirumbidza Mwari, vachifarirwa nevanhu vose. Uye Ishe akawedzera kukereke zuva rimwe nerimwe avo vaizoponeswa.
Mabasa 2: 44-47
Misangano yekereke yekutanga yaive yakaita sei?
Hatina ruzivo rwakawanda pamusoro pehurongwa hwemisangano mukereke yekutanga, asi tinoziva kuti zvimwe zvinhu zvakaitika:
Misangano: kuyanana chaive chikamu chakakosha chekereke yekutanga
Kudya Kwemanheru Kwokupedzisira: nhengo dzakarangarira rufu zvaJesu, sezvaakanga arayira.
Rubhabhatidzo: avo vaitenda muna Jesu vakabhabhatidzwa sehumbowo hwekutendeuka kwavo.
Nziyo dzekurumbidza: vatendi vakaimba nziyo dzokurumbidza Mwari muhumwe.
Kudzidzisa: vatungamiriri vakataura uye vakatsanangura Shoko raMwari kuungano.
Munamato: ichi chaiva chikamu chakakosha chemusangano; vose vakatsvaka mwari pamwechete
Kutora mukana kunokosha: Nhengo dzeChechi dzakakwanisa kutora chinhano nemashoko euchenjeri, kurudziro, zviporofita, nekududzira ndimi.
Chechi yekutanga yaiita misangano yayo mudzimba nemunzvimbo dzeruzhinji, se temberi, masinagoge nenzvimbo.
Vanhu vakati wandei vakaona kereke sengozi uye vakatambudza maKristu. Nekuda kweizvi, Havazi vatendi vose vakasara muJerusarema. Vakapararira kunzvimbo dzakasiyana-siyana, vachiparidza vhangeri kwose kwose kwavaienda. Nokudaro, vamwe vanhu vazhinji vakatendeuka. Kutambudzwa kwakabatsira vhangeri kukura.
“Asi avo vakanga vapararira vakaenda kwose kwose, vachizivisa vhangeri. Mabasa 8:4
Makakatanwa muChechi yekutanga
Nekuwedzera kwekereke uye kubuda kwemapoka akasiyana emunharaunda, dzimwe nharo dzakamukawo. Imwe yekutanga yaive hungu vasiri vaJudha vaigona kuva vaKristu uye kana vaifanira kuteerera mitemo yose yechiJudha. Mubvunzo uyu wakapatsanura pfungwa.
Kuti kereke irege kukamuranisa. vaapostora nevakuru vakasangana muJerusarema kuti vakurukure chinetso chacho uye ndouya nemhinduro. Vakasvika pa mhedziso yokuti munhu wose aigona kutora rutivi muUmambo hwaMwari uye kuti zvakanga zvisina kufanira kutevera mhemberero dzechiJudha dzakadai sokudzingiswa.
“Asi vamwe veboka revaFarisi, vaitenda, vakasimuka, vachiti: Zvinofanira kuvadzingisa, nokuvarayira kuchengeta murayiro waMosesi. Uye vaapostora nevakuru vakaungana kuti vadzidze nezvenyaya iyi.
Mabasa 15: 5-6
Pashure pacho, dzimwe nharo dzakawanda dzakamuka, asi yokutanga yakanga iri muenzaniso wakanaka we nzira yekugadzirisa dambudziko muchechi: terera mapato ese nepfungwa dzakavhurika, tsvaga chokwadi chaMwari uye gadzirisa dambudziko nehurongwa neruremekedzo.
Tinovimba chinyorwa ichi chinokubatsira kuti unzwisise yaive sei kereke yekutanga, marongerwo arakaitwa uye kuti wakawedzera sei makore awo okutanga. Kana ikozvino iwe unoda kuziva ndeupi musiyano uripo pakati pekatorike nemapurotesitendi, ramba uchivhura Ziva.online.
Ko chirairo zvinorevei
Zvinova 7 matadzo makuru
IZVO dzidza KUDUDZIRA uremu Kuderedza uremu | HWANO KUSVIRA Bhaibheri HWANO Sei Mwari Miscellaneous Chinangwa Mitsara Chechi yeKaturike Ngano Mirairo Mathematics Zviroto zvangu Minamato Popular Zvitendero Masakaramende Santos Uncategorized Zviroto Tables dzokufembera vachishandisa Whatsapp